Yesaia 42 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn akoa ne n’adwuma (1-9)
‘Me din ne Yehowa’ (8)
Wɔto ayeyi dwom foforo ma Yehowa (10-17)
Israel ani afura, na n’aso asiw (18-25)
42 Hwɛ! M’akoa+ a mikura ne mu denneennen! Nea mapaw no+ na magye no atom!*+ Mede me honhom ahyɛ ne mu;+Ɔde atɛntrenee bɛbrɛ amanaman no.+ 2 Ɔrenteɛm na ɔremma ne nne so,Na ɔremma obiara nte ne nne wɔ abɔnten so.+ 3 Ɔremmu demmire* a abukaw biara mu,Na ɔrennum ntamaban a ɛrefi wusiw biara.+ Ɔde nokwaredi bebu atɛntrenee.+ 4 Ɔrengow na ɔremmotow kosi sɛ ɔde atɛntrenee bɛba asaase so;+Na nsupɔw bɛtwɛn ne mmara.* 5 Yehowa ne nokware Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro.Ɔno ne Opumpuni a ɔtwee mu.+Ɔno na ɔtrɛw asaase ne ɛso nneɛma mu.+Ɔde ahome ma nnipa a wɔte so,+Na ɔde honhom ma wɔn a wɔnam so no.+ Nea waka ni: 6 “Me, Yehowa, mafrɛ wo trenee mu,Na maso wo nsa. Mɛbɔ wo ho ban na mede wo ayɛ apam ama nnipa,+Na mede wo ayɛ hann ama aman,+ 7 Na woabue anifuraefo ani,+Na woayi nneduafo afi afiase,Na woayi wɔn a wɔte sum mu afi afiase.+ 8 Mene Yehowa. Me din ne no;Meremfa m’anuonyam mma obiara,*Na m’ayeyi nso, meremfa mma ahoni.+ 9 Hwɛ, nea edi kan no aba mu;Afei mereka nsɛm foforo. Mereka ho asɛm akyerɛ mo ansa na aba.”+ 10 Monto dwom foforo mma Yehowa,+Munyi no ayɛ mfi asaase ano,+Mo a monam po so ne nea ɛwom nyinaa,Nsupɔw ne mo a motete so.+ 11 Momma sare ne ne nkurow mma wɔn nne so,+Nkuraa a Kedar+ te so. Momma wɔn a wɔtete abotan mu nni ahurusi;Momma wɔnteɛm denneennen mfi mmepɔw atifi. 12 Momma wɔnhyɛ Yehowa anuonyam,Na wonyi no ayɛ nsupɔw so.+ 13 Yehowa bepue sɛ ɔko mu ɔkatakyi.+ Ɔbɛkanyan ne ho sɛ ɔsabarima.+ Ɔbɛteɛm, ɔbɛteɛm denneennen;Ɔbɛkyerɛ sɛ ne ho yɛ den sen n’atamfo.+ 14 “Mayɛ komm akyɛ. Mimuaa m’ano, na mehyɛɛ me ho so. Afei mɛpene sɛ ɔbea a ɔrewo,Mɛhome hahyeehahyee, na matwe mframa; mɛyɛ ne nyinaa prɛko pɛ. 15 Mɛsɛe mmepɔw ne nkoko,Na mɛma ɛso afifide nyinaa ahyew. Mɛma nsubɔnten adan nsupɔw,*Na mama atare* ayoyow.+ 16 Mede anifuraefo bɛfa ɔkwan a wonnim so so,+Na mɛma wɔafa ɔkwan a wɔmfaa so da so.+ Esum a ɛda wɔn anim no, mɛma adan hann,+Na baabi a ɛhɔ yɛ mmonkyemmɔnka no, mɛma adan asaasetraa.+ Eyi na mɛyɛ ama wɔn, na merennyaw wɔn.” 17 Wɔn a wɔde wɔn ho to ahoni a wɔasen so,Wɔn a wɔka kyerɛ dade ahoni* sɛ: “Mone yɛn anyame”+ no,Wɔbɛma wɔasan wɔn akyi, na wɔn ani bewu pɔtɔɔ. 18 Mo a mo aso asiw, muntie;Mo a mo ani afura,+ monhwɛ na munhu. 19 Hena na n’ani afura sen m’akoa,Na n’aso asiw sen nea mesoma no no? Hena na n’ani afura sen nea wɔatua no ka,Na n’ani afura sen Yehowa akoa?+ 20 Wuhu nneɛma pii, nanso wonhwɛ. Wubue w’aso, nanso wuntie.+ 21 Yehowa trenee nti,N’ani gyee ho sɛ ɔbɛma mmara* no ayɛ kɛse na anya anuonyam. 22 Nanso wɔyɛ nnipa a nkurɔfo afom wɔn de wɔn kɔ;+Wɔn nyinaa aka ntokuru mu, na wɔde wɔn asie afiase.+ Wɔafom wɔn de wɔn kɔ, na ogyefo biara nni hɔ;+Wɔafom wɔn de wɔn kɔ, na obiara nni hɔ a ɔbɛka sɛ: “Momfa wɔn mmra!” 23 Mo mu hena na obetie asɛm yi? Hena na ɔbɛwɛn n’aso atie nea wɔbɛka akyiri yi? 24 Hena na ɔmaa kwan ma wɔfom Yakob nneɛma,Na ɔde Israel hyɛɛ nkurɔfo a wɔfom nneɛma no nsa? Ɛnyɛ Yehowa, Nea yɛayɛ no bɔne no? Wɔamfa n’akwan so,Na wɔantie Ne mmara.*+ 25 Enti ɔkɔɔ so hwiee abufuhyew,N’abufuw, ne ɔko a ano yɛ den guu no so.+ Na ɛhyew biribiara a atwa ne ho ahyia, nanso wanhu;+ Ɛhyew no, nanso wamfa ansie ne komam.+
^ Anaa “me kra agye no atom!”
^ Anaa “n’akwankyerɛ.”
^ Anaa “Me ne obi biara nkyɛ m’anuonyam.”
^ Anaa “nsaase a ɛda mpoano.”
^ Nt., “atare a demmire afifi wom.”